iPhone taariikhda 7 Release 2015: Marka aad ka heli kartaa iPhone 7 / iPhone 6s?
Part1: Marka doonaa iPhone cusub ee la sii daayay?
Part2: Sida loo noqdo kan ugu horreeya si aad u hesho iPhone
IPhone inta badan la sugayay ayaa ugu danbeyn u sabab ah. Tiro ka mid ah darroor siiyey dunida casriga ah oo dunida ku aragti dhaw galay muuqaalada iPhone cusub. Wararka la isla dhexmarayo ayaa tibaaxaya in kaliya waxa iPhone cusub eegi doonaa sida ama waxa qaababka cusub aynu ka filan karto. Inkasta oo ay dadka malayn karaa oo kaliya arrimo ku wareegsan iPhone cusub ee ay ka mid yihiin taariikhda la sii daayo, waxaa jira qaar ka mid ah wararka xanta ah in ay na siiyaan laga yaabaa in aragti waxa laga filan karo. Qaar ka mid ah muuqaalada xamanayaa ka mid ah:
Phone cusub waxaa la filayaa in ay helaan guddi cusub oo lagu qalabeeyay laga yaabaa in la Force Touch Integration
Waxaa kale oo dhici karta in la ah shidma faraha la casriyeeyay
Saxanka ilaaliya yaala gadaasha dambe ee LCD hadda ku dhegi doonta meel. Habkaani khatar gelin kara oo caqabad ku ah in ay dayactir screen xisbiga saddexaad inkastoo ay sidoo kale yareyn kara magdhow
Waxaa sidoo kale lagu xamanayaa in dukaamada cusub ayaa laga heli karaa hab ku dhawaad ​​"bendgate" la cusub "S" design.
Waxa laga yaabaa inay sii dhumuc weyn tahay tusaalayaal
Waxaa sidoo kale lagu xamanayaa in telefoonka laga sameeyey oo nooc ka mid ah xoog aluminium kaas oo noqon kara qalabka yaraynta waxyeellada inkastoo ay ka dhigi karaa telefoonka culus.
Su'aasha ugu weyn ee oo dhan si kastaba ha ahaatee, waa markii aan ka heli kartaa annagoo gacmahayaga ku iPhone cusub.
Marka doonaa 6s cusub iPhone (Plus) in la sii daayo?
A waa dhaqan Apple ayaa dhawray taariikhda sii daayo cusub iPhone sida qarsoodi ah oo si dhow ula dhawray. Wararka la isla dhexmarayo oo ku saabsan qalab cusub bilaabay bilood badan dib laakiin waa dhawaan kaliya in aanu barashada taariikhda loo sii daayo la soo jeediyay.
In kasta oo ay taariikhda waxaa weli la xaqiijiyay Apple, waxaa haatan soo baxeen in iPhone cusub ee la sii dayn doono maalinta Arbacada 9-kii September. On isla taariikhdaas sidoo kale aynu ka filan karto si aad u hesho macruufka cusub 9.
fiirin Let ee sii daayo Taariikhaha by Country. Kuwani waa taariikhaha marka iPhone ayaa la filayaa ilaa u-si pre ama iibka u noqon.
Hubi 6s iPhone cusub (Plus) sii daayay taariikhda adduunka hoos ku qoran:
USA Preorders- September 18-
Hindiya September 25-
Pakistan September 25-
Dubai UAE September 25-
UK September 25-
Australia September 25-
Japan September 25-
Shiinaha September 25-
Germany September 25-
France September 25-
Dhamaan taariikhahan beddeli kartaa tan iyo Apple weli si loo xaqiijiyo wax kasta oo iyaga ka mid ah. Khubarada si kastaba ha ahaatee isku raaceen in ay taariikhda ka hor si ah 18-kii September yahay si caddaalad ah sax ah. Waxaa la filayaa in la garaaco dukaamada adduunka oo dhan in 25-kii September.
Sidee in uu noqdo "Hore" si aad u hesho 6s iPhone (Plus)
Qof kasta ayaa isha ku sii daayo tan iPhone cusub. Haddii aad rabto in aad ka mid ah hore ugu noqon si aad u hesho gacmaha iPhone cusub, waxaan leeyihiin tabo dhowr ah si ay u caawiyaan. Ka hor inta aan helno si talooyin si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in aad xaqiiqsato in sida ugu dhaqsaha badan aad u hesho adigoo gacmahu iPhone waxaa laga yaabaa in ay ku xiran tahay gobolka, taariikhda lagu sii daynayo ee gobolkaaga iyo mararka qaar xitaa waqtiga soonka. Halkan waxa aad samayn karto si aad u hesho iPhone ka hor saaxiibbadaa oo dhanba.
1. Joog Ka Warqab
Si aad u hesho ilaa iyo macluumaadka ku saabsan taariikhda la sii daayo iPhone cusub, waxaad u baahan doontaa inaad wararka lagula socon karo. Nasiib wanaag idiin, waxaa jira dhowr goobood oo wararka iyo blogs in ay leeyihiin dhammaan macluumaadkii ugu dambeeyey. Waxaa laga yaabaa in Macluumaadka si bedesho waxaa muhiim ah in si joogto ah loo hubiyo si aad u yeelan karaan macluumaad sax ah oo ku saabsan marka ay u soo iibsadaan.
2. Hel aad pre-si horraantii
Wixii dal oo ay ka hor amar diyaar noqon doono, si loo hubiyo in aad hesho taariikhda saxda ah pre-amarka ku riday aad si waqtiga. Sidaas markay baxaan si ay dukaamada adduunka oo dhan, waxaad u baahan doontaa mudnaanta koowaad by kugula isagoo hore ka hor-ku amray.
3. Qaado dukaanka maalinta daayo hore
Haddii aad seegtay ku-amar ka hor ama ka hor amar aan la heli karin u ah dalka, hore u hesho dukaanka maalinta sii daayo. Waxay u badan tahay in kuwo kale oo badan waxay sugayaan isla maalintaas sii daayay aad tahay iyo haddii aad halkaas tagto soo daahay, waxaa laga yaabaa inaad sugto sii daayo kale. Maskaxda ku hay in maalinta sii daayo, dukaamada iPhone u muuqdaan in ay la isugu iyo helitaanka waxaa hore idinka badbaadin doonaa, mar.
> Resource > iPhone 6s> iPhone (Plus) taariikhda Release 2015: Marka aad ka heli kartaa 6s ka iPhone (Plus)?